श्रीमानबाट टाढा हुन महिलाको यस्तो चाल, वास्तविकता खुल्दा प्रहरी नै चकित ! – Aaj ko Sandesh
मुख्य पृष्ठ /News/श्रीमानबाट टाढा हुन महिलाको यस्तो चाल, वास्तविकता खुल्दा प्रहरी नै चकित !
एजेन्सी। धनाढ्य घरकी भारतीय एक महिलाले आफ्ना श्रीमानबाट छुटकारा पाउनको सबैलाई चकित पार्ने का ण्ड घ टाएकी छन् । उनले यस्तो का ण्ड गरिन् कि वास्तविकता खुल्दा अनुसन्धान गरिरहेका प्रहरी नै दंग परे । भारतीय मिडिया आज तकको समाचारअनुसार राजधानी दिल्लीकी यी महिलाले आफ्नै आ त्म ह त्याको झु’टो कहानी रचेकी थिइन्, जसको खुलासा गत मंगलबार भएको थियो ।
यी महिलाले उत्तर प्रदेशको गाजियाबादस्थित हिडन ब्यारेज नजिकै लगेर आफ्नो कार राखिन्, कारमा सु’सा’ इड नोट राखेर फरार भइन् । पछि उनी बैंगलोरमा भेटिइन् । आ त्म ह त्या को झु’टो कहानी रच्ने कोमल तालान नामकी यी महिलाले गाजियाबादको नहरको पुलमा आफ्नो गाडी राखिन् । त्यसपछि उनले नहरमा हाम्फा लेर आ त्म ह त्या गरेको खबर फैलियो । ३ दिनदेखि गोताखोरले नहरमा ला श खोजिरहेका थिए तर ला श भेटिएको थिएन ।
कोमलले कारमा सु’सा’ इट नोट पनि छाडेकी थिइन् जसमा उनले आफूले आ त्म ह त्या गर्न लागेको लेखेकी थिइन् । कोमलले यो सब गर्नुको पछाडि उनी श्रीमानदेखि हैरान भएको पाइएको छ । उनले आ त्म ह त्या को झु’टो कहानी रचेर श्रीमानलाई का’नूनी रुपमा फ’सा’उँन चाहेकी थिइन् । शनिबार बिहान ११ बजे पुलिसले पुलबाट बेवारिसे अवस्थामा स्कार्पियो कार बरामद गरेको थियो ।
स्कार्पियोमा सु’सा इड नोट थियो, जसमा कोमल तालानको नाम उल्लेख थियो । उनका पिता अनिल तालान भारतीय किसान युनियनका केन्द्रीय सचिव हुन्। उनीहरुको परिवार ग्रेटर नोएडामा बस्छन् । अनिल तालानले पनि छोरीलाई परिवारमा त’नाव दिइएको आ’रोप लगाएका थिए । तर, कोमल भागेर बैंगलोर पुगेको अवस्थामा भेटिएपछि उनलाई दिल्ली ल्याएर का’रवाही अगाडि बढाइएको छ ।
पाथीभरा देवीको उत्पतिसम्बन्धि थुप्रै किम्बदन्ती तथा जनश्रुतिहरू छन । भनिन्छः- परापूर्वकालमा पाथीभरा आसपासका गोठालाहरूले आफ्नो भेडीगोठ पाथीभरामा राखेका थिए । एकदिन अचानक अप्रत्यासित ढंगले देख्दा देख्दै ती गोठका बथानका बथान भेडाहरू अलप भए । त्यस्तो अकल्पनिय घ’टनाले स्तब्ध तथा हतप्रव भएका गोठालाहरूलाई रातमा देवीले दर्शन दिनु भै आफ्नो उत्पतिस्थल र आकृतिको बोध गराउँदै, भेडा बलिसहित पूजा अर्चना गर्ने निर्देशन दिनुभयो ।
भाग्य चम्काउन चाहानुहुन्छ ? यी उपाय अपनाउनुस्
आज २ वैशाख २०७८, बिहिवार : आजको राशिफल
विराटनगरमा मृ*त्यु भएका दुई जनाकै कोरोना रिपोर्ट यस्तो आयो